Buthidaung, Arakan State: NPDP's refusal to pass victory to USDP put party's candidates lives at stake (မိမိ၏အောင်နိုင်မှုကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီအား ပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သော NPDP ကိုစားလှယ်လောင်းများ အန္ဒရယ်တွင်းကျရောက်နေ) | Burma Election Tracker
Buthidaung, Arakan State: NPDP's refusal to pass victory to USDP put party's candidates lives at stake (မိမိ၏အောင်နိုင်မှုကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီအား ပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သော NPDP ကိုစားလှယ်လောင်းများ အန္ဒရယ်တွင်းကျရောက်နေ) Posted in abuse of government authority
According to Rohingya sources, it is believed the NPDP wonalandslide victory in Buthidaung Township, northern Arakan State, but the election commission has forced NPDP to signadocument accepting that the regime’s party, the Union Solidarity and Development Party (USDP), had won. NPDP candidates refused to sign and are facing the possibility of arrest. One source told CSW that their refusal to sign the document has put their lives in danger. CSW understands that the military has arrested approximately 100 villagers in Buthidaung who voted for the NPDP, to subject them to forced labour.
ရိုဟင်ဂျာလူထု၏ ပြောပြချက်များအရ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် NPDP အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူရသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က NPDPကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီက အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ကြောင်း အတင်းအဓ္ဓမ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ NPDP ရွေးကောက်ပွဲကိုစားလှယ်များက လက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး၊ ထိုသို့ငြင်းဆန်ခဲ့သောကြောင့် အဖမ်းခံရနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး၊ ၎င်းတို့၏ ဘ၀လုံခြုံရေးသည် အန္ဒရာယ်အတွင်းသို့ ကျရောက်နေကြောင်း သိရသည်။ ဘူးသီးတောင်ရှိ ရွာသားတစ်ရာခန့်ကိုလည်း အတင်းအဓ္ဓမခိုင်းစေမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ဟု သိရှိထားကြောင်း Christian Solidarity Worldwide (CSW)မှဆိုသည်။